प्रधानमन्त्रीको कमजोरीको दोष प्रधान्यायाधीशलाई ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानमन्त्रीको कमजोरीको दोष प्रधान्यायाधीशलाई ?
२०७८ आश्विन २६, मंगलवार ११:४२:००
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको चर्काे विरोध भएपछि उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशका जेठान हमाल नियुक्तिको तेश्रो दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपनि प्रधान न्यायाधीश राणाको विरोध रोकिएको छैन ।
केही राजनीतिक दल र कानुनविद्हरुले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । उनले ओलीको सत्ता गिराइदिएर देउवालाई प्रधान मन्त्री बनाइदिए वापत मन्त्रीपरिषद्, राजदूत र अन्य सबै सरकारी निकायहरुमा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ ।
प्रश्न उठेको छ–देउवाको गल्तीको दोषको किन प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोकाइएको छ ? के प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा विघटन गरिदिएको प्रतिनिध सभाको दुवैपटक पुनस्र्थापना गरिदिएर लोकतन्त्रलाई लगाएको गुन नै उनले गरेको महापाप थियो ? के उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा गरिदिएको घोषणा नै महापाप थियो ? के ओलीको सत्ता गिराएर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्तामा पु¥याईदिनु नै महापाप थियो ?
त्यसैले त नेपाली समाजलाई बैगुनी भनिएको हो । गुनको बदला गुन खुनको बदला खुन त्यसै भनिएको होइन । नेपाली समाजमा पहिल्यैदेखि नै गुनको बदला गुन र खुनको बदला खुन भन्ने उखान चलिआएको छ । देउवाले प्रधान न्यायाधीश राणालाई खुसी पार्न उनका केही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन खोजेका हुन सक्छन् । यो कुरा राणालाई थाहा नहुन पनि सक्छ । अर्थात् राणालाई खुसी पार्नुपर्ने देउवाको कमजोरी राणालाई नै पनि थाहा नहुन सक्छ । देउवाले राणाका सहयोगी, पिए वा श्रीमतिको सहमति लिएको तर राणालाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीहरु समक्ष असोज १८ मै आफूलाई यो कुरा थाहा नभएको बताएका थिए । सोही दिनको मिडिया पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि राणाले आफूलाई यो कुरा थाहा नभएको बताइसकेका छन् ।
बार पदाधिकारीहरुका अनुसार आफूले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन दबाब नदिएको स्पष्टीकरण प्रधान न्यायाधीश राणाले दिएका थिए र उनले थपेका थिए गजेन्द्र हमाल भनेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरहका कांग्रेस हुन मैले उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ला र ?
बार पदाधिकारीहरुसंग उनले जे भनेका थिए कुरा दुईघण्टा पनि सर्वाेच्च अदालतद्धारा जारी भएको प्रेस विज्ञप्तीमा दोहो¥ियएको थियो । अर्थात् प्रधान न्यायाधीश राणाले कसैलाई पनि मन्त्री बन्न दबाब दिएका थिएनन् । प्रधान न्यायाधीशको तहबाट यो कुरा आइसकेपछि पनि उनलाई विवादमा तान्ने, उनको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने कोशिस भइरहेको छ ।
नेपालको कानुन समुदाय सुरुमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई खुसी तुल्याउने, उसबाट आफ्ना कुराहरु पूरा गराउन कोसिस गर्ने र काम भइसकेपछि कुप्रचार गरेर पत्रु बनाएर घर पठाउनमा तल्लिन छ । राणाको समेत अबको तेह्र महिनाको समयमा यही कुराको पराकाष्टा नदोहोरिएला भन्न सकिदैन ।
विगतका प्रधान न्यायाधीशहरुले पाएको अवकासलाई दृष्टिगोचर गर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । कसैलाई चोखो रुपमा अवकाश हुन दिइएको छैन ।
जबजब प्रधान न्यायाधीशहरु अवकाशको मुखमा पुग्छन् उनीहरुलाई एउटा वा अर्काे बखेडा झिेकर पत्रु बनाउने प्रयास गरिएको इतिहास हामीहरुको सामुन्नेमा साक्षी छ ।
विश्वनाथ उपाध्यायजत्तिको सबैभन्दा उम्दा प्रधान न्यायाधीश हुन वा अन्य जुनकोही प्रधान न्यायाधीश नै किन नहुन एकहिसाबले लखेटेको लेखेटै गरिएको छ ।
केशव प्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीहरुलाई समेत रछ्यानमा पुग्नेगरी गाली गलौज गरेर घर पठाइएको थियो । सुरुमा गुणगान गाएर अखबारमा छापिन्छ, उनलाई माथि उचालिन्छ र पछि अवकास पाउने पाउने बेलामा घरफिर्ता पठाइने गरिएको छ ।
राणाले प्रधान न्यायाधीशको रुपमा लगभग तीनभन्दा बढीको अवधि विताइसकेका छन् । उनले यी तिनबर्षको अवधिमा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गरिदिएका, एनसेलको कर उठाइदिएका, सुनकाण्डका अभियुक्तलाई छाडिदिने न्यायाधीशलाई कारबाही गरेका र न्यायाधीश नियुक्तिमा राम्रा व्यक्ति छानेका जस्ता कुराहरुको कुप्रचार गर्ने गरिएको छ ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा समेत राणाले एउटा न्यायाधीशको रुमपा चित्तले देखेको निर्णय गरेका छन् । तर उनलाई देखिनसहने वर्गले उनीमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । न्यायाधीशको रुपमा मान्ने तर न्यायाधीशको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नदिने वा गर्न पाउदैनस भनेर खबरदारी गर्ने कार्य नेपाली समाजमा जकडिएर बसेको एउटा गम्भीर अवस्था हो ।
अहिले राणा पनि चौतर्फी दबाबमा छन् । राजनीतिज्ञले उनलाई खुसी पार्न खोजेको छ, तर बार र न्यायिक समुदाय नै उनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रश्तुत भइरहेको छ । उनले गरेको योगदानको कदर गर्न समाज तत्पर छ, तर बार र न्यायिक समुदाय नै उनको योगदानको कदर गर्न दिइरहेको छैन । देउवाको कमजोरीको दोष राणालाई दिनु कसरी उचित हुन्छ ?